योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ ? - NayaNepal News
Home स्वास्थ्य योनि कसिलो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
तपाईंहरूबीचको सम्पर्कलाई चर्चामा ल्याउने खतरा हुन्छ । यस्तो जोखिम कति छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा उसले भयादोहन blackmail गर्न पनि सक्छ, त्यसैले भयादोहन गर्न नसकोस् भनेर मन बलियो बनाउनुपर्छ । परिस्थिति खुलस्त भएको स्थितिमा जीवन अघि बढाउने अर्थात् सामना गर्ने अठोट छ भने तपाईंलाई डर–धम्की देखाउन सजिलो हुने छैन । -Saptahik
Previous articleसँगै चियापान, अनि गोली हानाहान
Next articleविश्व जनसङ्ख्या दिवस : प्रजननमा नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापनमा ध्यान दिऔँ
एक बच्चाको खोपमा राज्यको ३० हजार लगानी, वार्षिक १२ अर्ब...
क्यान्सर पीडित बिभालाई सहयोग